Mashandisiro ekushandisa iyo itsva swipe inoshanda pane iyo iPad keyboard ne iOS 11 | IPhone nhau
Jesu anotema | | iPad
Nekuvhurwa kweiyo nyowani yekushandisa system iOS 11, iyo iPad yaita shanduko inoshamisa, ichiita kuti chishandiso ichi chiratidzike zvakanyanya uye zvakanyanya sekombuta. Iyo nhau Chinonyanya kuzivikanwa kuve kuiswa kwe dock pane iyo skrini yeimba uye zviripo mune chero app yatiri kushanda pane uye nyowani faira system, kubva kwatinogona kubata edu ese maforodha e ICloud. Uye zvakare, iyo pa-screen keyboard, ichichipa nemabasa matsva anotibvumidza isu kusarudza mavara nekukurumidza uye zvinonzwisisika.
Iyi keyboard nyowani IPad QuickType yaisanganisira mumakiyi makuru mamwe chete painoonekwa mavara, zviratidzo uye manhamba zvakajairika kuitira kuti nemasaini mashoma tikwanise kuzvishandisa tisina kana chinongedzo chebhodhi nekiyi iri kuzasi kwekona kuruboshwe. Iri basa nyowani rinonzi, muChirungu, «Flick»
1 Maitiro ekumisikidza Flick keyboard
3 Dzima swipe basa
Maitiro ekumisikidza Flick keyboard
Kazhinji kutaura, ino keyboard basa rinouya inogoneswa nekutadza uye iyo nguva yatino gadziridza yedu iPad kune iOS 11 isu tinofanirwa kukwanisa kuishandisa, asi zvikasadaro, nematanho akapusa aya tinogona kuishandisa.
Enda kune iyo marongero iPad uyezve General
Kamwe ipapo, tsvaga uye pinda sarudzo Teclados
Pakati pechinyorwa chesarudzo chinofanira kuoneka imwe nerinotevera chinyorwa: «Rega kutsvedza munwe wako pamakiyi".
Unofanira zviite kukwanisa kushandisa slide basa.
Kana tangomiswa, mashandiro eizvi ari nyore kwazvo, isu tinongofanirwa kudzvanya kiyi inodiwa uye tisina kusimudza munwe Rova zvakasimba pasi kuti Activate kiyi yechipiri inowanikwa pamusoro petsamba. Kana izvi zvangoitwa, zvinobva zvangoerekana zvaonekwa mundima yedu yemavara pasina chikonzero chekuita chero chimwe chinhu.
Iyi ficha nyowani ichave iripo kune ese maPads anotsigira iyo nyowani iOS 11 inoshanda sisitimuKunze kweiyo 12'9-Pro modhi. Mamwe ese ePads anowirirana anobva kuPad ​​Mini 2 zvichienda mberi, yechishanu chizvarwa iPad, iPad Mhepo uye, zvedi, iyo iPad Pro mamodheru.
Dzima swipe basa
Kunyangwe iri basa rinogona kutiponesa nguva patinenge tichinyora, zvinokwanisika kuti havazi vese vashandisi vanozvifarira uye vanosarudza kuchengeta iyo keyboard sezvavaive vachishandisa muIOS 10. Kuti tiite izvi, isu tinongofanirwa kuita nhanho imwechete yapfuura asi kuita kuti basa racho rishaye basa, ndiko kuti:
Unofanira zviregedze kukwanisa kushandisa slide basa.
Kubva pakuona kwedu, ibasa rinogona kuva inobatsira chaizvo kana tikatsvaga iyo kubudirira neIpad yedu uye iyo nyaradzo yekusafanirwa kushandura iyo keyboard kuti ugone kunyora manhamba kana chero chiratidzo chatinoda. Apple yatora nhanho hombe nekupa iyi ficha kwatiri kune angangoita ese maPad mhando anowirirana neIOS 11.
Iwe iwe, vashandisi vePadad vane iOS 11, munofunga nezve chinhu chitsva ichi?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPad » Mashandisiro ekushandisa iyo itsva swipe ficha pane iyo ipad keyboard ne iOS 11
Ini ndinofunga zvakanaka kuti ivo vanowedzera aya marudzi ezvekufarira kuitira nyore vashandisi, ndiko kubudirira.
Iri basa raive ratove muIOS 10 chete kuti rinogona kushandiswa mukati mekushandisa senge mapeji
Yakanakisa keyboard !!!
Izvo zvinondipa ini fungidziro yekuti ivo vanoita iyo partridge dzungu. Paunenge wajaira chinhu uye wochibata zviri nyore uye pasina matambudziko, vanokupa kuvandudza kwausingazive kuti waida.
Mhosva ndeyekuchengeta ketani yekuvandudzwa uye kupisa zviwanikwa kuti zvida zvigadzirwa zvehardware.
Ini ndakakanganwa kupindura zvisati zvaitika pamusoro pekufambira mberi kunopokana, nhau dzisingadiwe dzinosanganisirwa.
Muchiitiko changu, ini ndinoshandisa akateedzana eanonyengedza mashanu akapatsanurwa nechena nzvimbo kupatsanura zvakanyorwa muzvinyorwa, semuenzaniso pakati pezvinyorwa zvebhuku. Zvakanaka, nekhibhodi nyowani mushure mekutanga hyphen kana uchinyora nzvimbo isina chinhu, zvinobva zvango pinda mune yakamisikidzwa rondedzero fomati. Ini handisi kuwana nzira yekudzima ichi chimiro, icho chandinoona chakanyanya kutsamwisa.
Zvakanaka, ndinoiona iri pfungwa yakanaka kwazvo kuti ive inobudirira (ndinofungidzira mukusavapo kwekukwiza zvinhu zvinotaurwa mune zvimwe zvirevo). Kusafanira kuchinja "keyboards" kuisa zviratidzo zvinonyanya kukurumidza. Zvino, pane chero munhu anoziva chikonzero chekusiya iyo 12,6 ”iPad kubva pachinhu ichi?
Ini ndinogona kuzvinzwisisa maererano nemamodheru matsva, sezvo iyi yaive yekutanga modhi "Pro". Asi pandinoona kuti icho chinhu chinouyawo mumamodheru ekare ... Zvinonyadzisa zvakadii. Ini handizive kuti uyu modhi waifanira kubhadhara marii kuti uwane shoma. 🙁
Nyowani 4k vhidhiyo yeApple Park
Akanakisa Macheja asina waya e iPhone 8, 8 Plus, uye iPhone X